» कांग्रेस जितेको दिन माला लगाउँछु – इन्द्रबहादुर बानियाँ
कांग्रेस जितेको दिन माला लगाउँछु – इन्द्रबहादुर बानियाँ
२०७८ मंसिर २०,सोमबार १९:०३
यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । यहाँ कसैको जितहार छैन र कसैले यसलाई जितहार, उत्सव र पीडाको विषय बनाउनु हुँदैन । कांग्रेसलाई एकजुट बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । सबैले त्यही भावना, मर्म र विषयलाई बुझेर अगाडि बढिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तरगत हेटौंडामा सम्पन्न अधिवेशनबाट बागमती प्रदेशको सभापति पदमा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भए । २०४४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका उनी नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यको समेत अनुभव हासिल गर्दै २०७३ सालमा कांग्रेस मकवानपुरका सभापति भएका थिए । २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका ५२ बर्षीय बानियाँले कम्युनिष्टहरुको लाल किल्ला भनेर चिनिने मकवानपुरमा कम्युनिष्टको किल्ला भत्काएर २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा संविधानसभा सदस्य विजयी भएदेखि निरन्तर सांसद रहेका छन् ।
उनले २०७४ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री र गृह राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी संहालेका छन् । २०७४ सालमै मकवानपुर संघीय क्षेत्र २ को (ख) बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि बानियाँले सर्वसम्मत रुपमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता चयन भई कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेशसभामा बलियो प्रमुख प्रतिपक्ष र सशक्त प्रतिपक्षी दलको रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई उभ्याउन बानियाँले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका प्रस्तुत गरेकाले प्रदेशसभामा पनि बानियाँको धारणालाई सबै दलले अर्थपूर्ण रुपमा लिँदै आएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र सबैमा विश्वासिलो व्यक्तित्वको रुपमा परिचित उनीसँग तु खबरले आज गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिको संस्थापक सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ । समग्रमा निर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
उत्तर: धन्यवाद । कांग्रेस लामो समय संघर्ष गरेको पार्टी हो । राणा, राजा र माओवादीको शान्ति प्रक्रियादेखि लामो संघर्षको यात्राबाट आएको पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको तयारीको शिलशिलामा भएको यो बागमती प्रदेश स्तरीय पहिलो अधिवेशनमा कार्यकर्ता र कांग्रेसी साथीभाइहरुले मलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ ।
यसलाई मैले जिम्मेवारीसँगै चुनौतीको रुपमा पनि लिएको छु । कांग्रेसलाई कसरी गरिब जनता, किसान, मजदुर तथा सर्वहाराको पक्षमा र लगानी गर्ने ठुला पुँजीपतिहरुको पक्षमा लगानीको सुरक्षा र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने र त्यो लगानी तथा पुँजीको विकास गरेर त्यसबाट धेरैलाई रोजगारी दिने पक्षमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा चासो थपिएको छ । मलाई प्रदेश सभापतिको जिम्मेवारी दिनुहुने महाधिवेशन प्रतिनिधी, निर्वाचनमा खटिने सबै निर्वाचन समिति, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु् । म सबैलाई एकसाथ बनाएर बढो उत्साहका साथ यो जिम्मेवारी संहाल्न तयार छु । समग्रमा निर्वाचन भयरहित, निश्पक्ष र शान्त वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । उत्ताउलो भड्किलो भएको छैन । सबै उम्मेदवारले मत परिणाम सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ । महान अभियान सम्पन्न भएको छ । म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
प्रश्न: कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार समूहहरु देखिएका छन्, तुलनात्मक रुपमा नेतृत्वमा संस्थापन पक्षको उपस्थिति बलियो छ । पार्टीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?
उत्तर: हेर्नुस्, कांग्रेसको विचार एउटै छ । स्वर्गीय विपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको विचार एउटै हो । अब नेतृत्वको लागि विभिन्न समूह, गुट भन्ने कुरा जुन छ, त्यो स्वभाविक र जहाँ पनि हुने कुरा हो । हामी एउटै विचारमा अडिक छौँ । ‘समाजवाद’ हाम्रो मुल मर्म हो । विपिले प्रतिपादन गरेको समाजवाद समान अवसरको वितरण हो । र त्यसपछि कोही भोकले, कोही शोकले र कोही रोगले मर्न नपरोस् राज्यले ती सबैलाई हेर्ने व्यवस्था रहोस् भन्न नै समाजवादको मुल मर्म हो । त्यसकारण त्यो बाटोमा सबैलाई लिएर हिड्ने र बागमती प्रदेशलाई त्यही बाटोमा डोर्याउने मेरो महाअभियान हो । यो महाधिवेशन हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो ।
हामी लोकतान्त्रीक पद्धतीलाई स्वीकार गर्दछौँ । त्यसकारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेतृत्वलाई सबैले सम्मान गर्ने, अल्पमतको राम्रा विचार छन् भने त्यसलाई पनि एजेण्डाको रुपमा नेतृत्वले अगाडि बढाउने काममा हामी चुक्ने छैनौँ । एउटै विचार बोक्ने हामी सबै पक्षलाई मिलाएर मिलेर समान अवसर साटासाट गरेर अघि बढ्छौँ ।
प्रश्न: प्रदेश अधिवेशनमा पनि त ३ वटा स्पष्ट समूहहरु देखिए । पछि एउटा समूहले तपाईलाई समर्थन गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै छ । कांग्रेस आफैँ गुट उपगुटमा रुमलिरहँदा आम निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर गर्दैन ?
उत्तर: मैले एउटा प्रण गरेको छु । त्यो के हो भने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कसैको जित र हार हुँदैन । कसैको उत्सव र पीडा हुँदैन । त्यसकारण मैले माला खादा लगाएर हर्षोल्लास गरिन् । जब आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष जान्छौँ । कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जनताले जिम्मेवारी सुम्पिएको दिन माला खादा लगाउने बाचा गरेको छु । अब, तपाईले भनेको ठिकै पनि हो । एउटा विचार भित्र ३ वटा धार अर्थात नेतृत्वको लागि ३ वटा समूहको प्रतिस्पर्धामा थियौँ हामी । ३ मध्येमा कांग्रेसको हाम्रो सभापतिमा निर्वाचित हुनको लागि ५१ प्रतिशतको प्रावधान जुन रहेको छ, विधानको प्रावधानको कुराले मात्रै अलिकति अप्ठेरो भएको हो । नत्र भने मैले सुरुमै ४८ प्रतिशत मत ल्याएको अवस्था थियो । र त्यो ५१ प्रतिशत नपुगेको हुनाले लोकतन्त्रको सर्वमान्य मान्यता अनुसार बहुमत प्राप्तलाई नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने क्रममा मेरो आदरणीय श्रद्धेय नेता भीमसेन दास प्रधानले मलाई साथ दिनुभयो । अर्का उम्मेदवार जगदिश्वर नरसिंह केसीले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न चाहानुभयो ।
लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धालाई हामीले सहज रुपमा लिनुपर्छ । विपीले पनि भन्नुभएको थियो, जतिनै लोकप्रिय भएपनि पार्टी भित्र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आयो भने एउटै पार्टीको एउटै चारतारे झण्डाभित्र पनि आफ्नो गतिविधिसँग कति साथीहरु सहमत छन् कति असहमत छन् भन्ने कुरा हेर्न र बुझ्न पाइन्छ । त्यसकारण यो लोकतन्त्रको राम्रो र सुन्दर पक्ष हो । अघि तपाईले भने जस्तो गुट–गुपगुट भन्ने हुँदै नभएको होइन ।
यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि मात्रै यो समूह र त्यो समूह भनेर विभाजित भएका हौँ । निर्वाचन सकियो अब कांग्रेसलाई माया गर्नेहरु एकै ठाउँमा उभिएर अन्य दलसंग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी सक्षम छौँ । प्रदेशभर समाजवादको बाटोमा हिँड्नेहरुलाई जिताउन म तल्लीन रहने छु । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभिन्न समूह बनाइएको भएपनि आम निर्वाचनमा हामी कांग्रेस हौँ । हाम्रो निर्वाचन चिन्ह रुख हो । हामी एकबद्ध भएर पार्टीको तर्फबाट सक्षम उम्मेदवारलाई अघि सार्छौँ र विजयी गराउँछौँ ।
प्रश्न: तपाईको नेतृत्वमा कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिले के–कस्ता गतिविधिहरु संचालन गर्छ ?
उत्तर : अब हामी महाअभियानमा रहेको संविधान बमोजिम विधानलाई रक्षा गर्दै पहिला हामी १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्नको शिलाशिलामा नजिक पुगेका छौँ । यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सबल, सक्षम, धैर्यबान र पार्टीमा लामो समय काम गरेको नेतृत्वलाई स्थापित गराउने र त्यसपछि पार्टीलाई एउटा नयाँ ढंगले उहाँहरुको अनुभव र हाम्रो जोश जाँगरलाई लिएर अगाडि बढ्ने जो हाम्रो श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ ।
हिजोको दिनमा पार्टीका स्वर्गीय श्रद्धेय सभापति शुशिल कोइरालाले सहमति सहकार्य र एकताको राजनीतिमा उहाँले जसरी संविधान जारी गर्ने बेलामा सबैलाई मिलाउनुभयो । मधेशका केही साथीहरुबाहेक अधिकतम सहमति जुट्यो । तर, निर्वाचनको बेलामा संविधानमाथि असहमति राखेका तराईका साथीहरुलाई पनि सहमतिको बाटोमा ल्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचन गराउन, पहिलो सफल सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसपछि धैर्यता गरेर बस्दाखेरी प्रचुर बहुमत आएको माओवादी एमाले मिलेर बनेको नेकपा, जुन पार्टी गरिब, मजदुर किसान सर्वहाराको नाममा बनेको पार्टी । त्यो पार्टी जसले गरिबको सपना, गरिबको इच्छामाथि आश्वासन बाँडेर जुन किसिमको भ्रम छरेको थियो ।
हामी पहिले देखि नै भन्थ्यौँ, लोभिलाई लाभले, डराउनेलाई त्रासले, मुर्खलाई भ्रमले भनेर यो तीनवटै कुरा बोकेर हिँडेका कम्यूनिष्ट विशेषगरी त्यसभित्रका पनि एमाले । त्यस्तो प्रचुर बहुमतमा रहेको नेकपा सरकारको पालामा धैर्यतापूर्वक अनुशासित प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर हामीले जनतासामू देआइदियौँ । त्यहाँ भित्रको ओलीवादको एउटा अहम, उदण्ड, लोकतन्त्र विरोधी चरित्रका कारण उहाँहरुको पार्टीका साथीहरुको भनाई अनुसार नेकपा र विशेषगरी एमालेबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम नदेखिएपछि नेपाली कांग्रेसको श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवालाई लोकतन्त्र बचाउँनको लागि, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि जनताको उपलब्धीको रक्षा गर्नको लागि तपाई अघि बढ्नुपर्यो, अग्रसरता लिइदिनुपर्यो, संविधानको रक्षा गरिदिनुपर्यो, ओलीले उदण्डता र घमण्ड प्रस्तुत गर्दै संविधान मास्न थाले, मध्यावधी निर्वाचन गर्न लागे भनेर गुनासो गरेपछि उहाँले मुलुकको नेतृत्व संहालिदिनुभयो ।
त्यस्ता धैर्यवान नेतृत्वको कार्यशैली, विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै अब नयाँ युवा पुस्ता पनि नेतृत्वमा आउनुपर्छ । अर्को कुरा हामी सदैव संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कुरामा अडिग भएर लागेका छौँ । हामी कांग्रेसको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन लाग्छौँ । जनताको पीरमर्काको सम्बोधन गर्न लाग्छौँ । विशेषगरी यीनै गतिविधि हुन्छन् ।
प्रश्न : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले अन्य दलहरुसंग गठबन्धन गर्छ कि एक्लै निर्वाचनमा जान्छ ?
उत्तर: अब अघि पनि तपाईले भन्नुभयो । पहिलो कुरा त ३ वटा धार लिएर कांग्रेस कसरी निर्वाचनमा जान्छ भनेर तपाईले साध्नुभएको थियो । जसरी प्रदेशमा भीमसेन दास दाजुले बहुमतलाई साथ दिनुभयो । त्यस्तै हामी भित्र गुट उपगुट भएपनि निर्वाचनमा एकजुट हुन्छौँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छौैँ । स्थानीय निर्वाचन र हाम्रो पार्टीको निर्वाचन फरक विषय हो । हाम्रो पार्टीको निर्वाचनमा चाँही एउटा रुख मात्रै हुन्छ ।
एउटा मात्रै हाम्रो चारतारे झण्डाको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रुख र चारतारे झण्डाबीचको प्रतिस्पर्धामा कसले कसलाई साथ दियो कसले कसलाई दिएन भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । र हामी भित्रको त्यो एकता जनताको बिचमा जाँदा टुट्दैन । किनभने हामीले बारबार कम्युनिष्ट ले आन्तरिक लोभ, लाभ, भ्रम र त्रासका साथ जुन मत लिएको थियो र नेतृत्वमा पुग्नासाथ उनीहरुको गतिविधि परिवर्तन भयो त्यसले जनता निराश भएको महशुस गरेका छौँ । हिजो आफुले आफ्नो पार्टीलाई भोट नहालेर अर्कालाई हाल्दाखेरीको पीडा सबैले बुझेकै छौँ । त्यसकारण आन्तरिक चुवावको कारणले गर्दा अन्ततिर भोट हालेर अघि बढ्ने कुरा रहँदैन ।
पहिला हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ । प्रदेश अधिवेशन लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । प्रदेश नम्वर २ को मात्रै बाँकी हो । त्यसकारण अब सबै तिरको अधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा कांग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्छ । चुनावको तिक्तता रहँदैन । तिक्तता भएपनि तिक्तताभित्र पनि एकताको भावना जगाउँछौँ । पार्टी सिद्धान्त लोकतन्त्र र समाजवादको रक्षाको लागि हामी सबै एकजुट हुने परिस्थितिको निर्माण गर्न सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्छौँ । अब एकजुट बनाउनको लागि प्रयास गर्दागर्दै अनावश्यक पार्टीमा बाधा व्यवधान गर्ने व्यक्तिबाट पार्टीलाई कहिलेपनि फाइदा पुग्दैन । बाधा पन्छाउँदै जान्छौँ । र, अर्को दलसंग गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभएको थियो, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रश्न: अन्तमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
उत्तर: नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तरगत पहिलो पटक भएको प्रदेश अधिवेशन अन्तरगत बागमती प्रदेश अधिवेशनमा मलाई जिम्मेवारी सुुम्पिनुहुने सबै साथीहरुप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छु । सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु र जतिपनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि हुनुभएको छ । म उहाँहरु सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहान्छु । उहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । यहाँ कसैको हार छैन । यहाँ कसैको जित छैन र कसैले यसलार्य हार र जितको विषय नबनाएर, उत्सव र पीडाको विषय नबनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कांग्रेसलाई एकजुट बनाएर लिएर जानुपर्छ । यो पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसकारण सबैले त्यही भावना, मर्म र विषयलाई बुझेर अगाडि बढिदिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु । तपाईको मिडियामार्फत् सबैमा प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अधिवेशन सम्पन्न भयो । सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु, जय नेपाल ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलद्वारा जनप्रतिनिधिलाई स्वागत तथा सम्मान
कांग्रेस मकवानपुरगढीद्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान
पाँच दलीय गठबन्धन निरन्तर जाने कांग्रेस नेता बानियाँको दावी
हेटौंडा अस्पताललाई कांग्रेसद्वारा ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
एमाले र माओवादी परित्याग गरी ६ जना कांग्रेस प्रवेश
‘एमाले मुर्छा अवस्थामा पुग्यो, अब समाप्त हुन्छ’
सात वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस पहिलो